Thursday December 14, 2017 - 14:03:12 in Wararka by Super Admin
Rooboow ayaa horay usoo noqday Afhayeenka Al Shabaab
Roobow oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbooyinka ayaa kulamo laleh saraakiil katirsan dowladda Mareykanka iyo taliska ciidanka Kenya ee Jubbada Hoose ku sugan.
Mukhtaar Rooboow oo uu la socdo wasiirkii hore ee G/dhigga DF-ka ayaa saraakiil katirsan ciidamada AFRICOM kulamo kula qaadanaya saldhig kuyaal garoonka diyaaradaha Kismaayo.
Ilo wareedyo ay SomaliMeMo heshay ayaa sheegaya in socdaalka Rooboow ee Kismaayo uu salka ku haayo dalab uga yimid saraakiisha ciidanka Mareykanka ee ku sugan garoonka diyaaradaha Kismaayo waxaana loo badinayaa in kulanka talooyin iyo awaamir lagu siinayo Rooboow ka hor inta uusan magaalada Baydhabo uga dhawaaqin dagaalka uu lageli doono Al Shabaab.
Mukhtaar Rooboow oo mashruuciisa cusub ay geed fadhi u yihiin saraakiil Itoobiyaan ah oo ku sugan Baydhabo iyo Xudur ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay wada tashiyo kala duwan laqaadanayay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka ka dhanka ah Shabaabul Mujaahidiin.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Axmed Madoobe hoggaamiyaha maamulka ‘Jubbaland’ uu kulan laqaatay Rooboow waxayna is dhaafsadeen talooyin ku aaddan ka guul gaaridda dagaalka ka dhanka ah wilaayaatka islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, Axmed Madoobe ayaa Rooboow kula kaftamay in wadadan uu isagu ugasoo horreeyay walina uusan guul muuqato ka gaarin.
Rooboow ayaa bishii lasoo dhaafay wariyaasha magaalada Baydhabo ku amray in aysan ugu yeeri Karin "Abuu Mansuur oo isku dhiibay dowladda Federaalka” balse ay ugu yeeraan Abuu Mansuur oo wadahal kula jira dowladda.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in magac walba oo uu labaxo Roobow uusan wax cusub kusoo kordhin doonin saaxada loolanka siyaasadda Soomaaliya uuna noqon doono dagaal Ooge Boos kasoo ciriirsaday dagaalka waqtigiisu dheeraaday ee Mareykanka iyo Itoobiya uga jiraan Soomaaliya.